Wathann Film Festival #10 Entry Form
- ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်ကူးသော ဒါရိုက်တာသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
- ပြိုင်ပွဲဝင် ရုပ်ရှင်ကားသည် ပြသချိန် မိနစ် (၃၀) ထက် မပိုသော ရုပ်ရှင်ဖြစ်ရမည်။
- ရုပ်ရှင်ကားသည် မြန်မာဘာသာစကားပြောဖြစ်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာတန်းထိုးပေးရမည်။ မြန်မာဘာသာစကားပြော မဟုတ်ပါက မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ စာတန်းထိုးပေးရမည်။
- ၂၀၁၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ထုတ်လုပ်ထားသော ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ရမည်။
- ပြိုင်ပွဲဝင်ရုပ်ရှင်ကားသည် ပြည်တွင်း မည်သည့် နေရာတွင်မှ မပြသရသေးသည့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ရမည်။ ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် ပြသထားသည့် ရုပ်ရှင်မဖြစ်ရပါ။ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသဖူးသည့် ရုပ်ရှင် ပြည်တွင်း မည်သည့် နေရာတွင်မှ မပြသရသေးသည့် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါက ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
- အွန်လိုင်းတွင် တင်ထားသော ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပါက ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
- Entry form နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Link များကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရပါမည်။
- ပေးပို့ထားသော ရုပ်ရှင်များကို အကြိုရွေးချယ်ရေး Pre-selection အဖွဲ့ မှ ရွေးချယ်ပြီး ဆန်ကာတင်ရွေးချယ်ခံရသော ရုပ်ရှင်ကားများကိုသာ အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Original Title ဇာတ်ကားအမည် (မြန်မာ) *
Applicant Name ေဖာင္ျဖည့္သူ အမည္ *
Do you authorize our festival to present an excerpt of your work up to2minutes and the stills from your work for festival's promotion? မိမိရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ ရုပ္ေသဓာတ္ပံုျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ရွင္ အစိတ္အပိုင္း (၂ မိနစ္ထက္ မပိုေသာ) မ်ားကို ၀ႆန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ Promotion လုပ္ရန္ အသံုးျပုခြင့္ျပဳပါသလား။ *
No သေဘာ မတူပါ
Applicant Contact Phone Number ေဖာင္ျဖည့္သူ၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ *
Synopsis in English (1000 characters maximum) ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း (အဂၤလိပ္ဘာသာ) (စာလံုးေရ ၁၀၀၀ ထက္ မပိုရ) *
Producer's Phone Number *
Producer's Email address *
Do you authorize our festival to broadcast your film on festival's media partners? မိမိရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၏ Media Partner မ်ားတြင္ ထုတ္လြွင့္ျပသရန္ သေဘာတူပါသလား။ *
The film must be with English Subtitles. If the film is in other langugage, Myanmar and English subtitles is required. ပေးပို့သည့် ရုပ်ရှင်သည် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးထားရပါမည်။ တခြားဘာသာစကားဖြစ်ပါက မြန်မာနှင့် အင်္ဂလိပ် စာတန်းထိုးပေးရပါမည်။ *
Do you authorize our festival to show your film in Wathann Film Festival: Traveling Cinema Program? မိမိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဝဿန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏ Traveling Cinema နယ်လှည့် ပြသသည့် အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပြသရန် သဘောတူပါသလား။ *
Synopsis in Myanmar (1000 characters maximum) ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း (စာလံုးေရ ၁၀၀၀ ထက္ မပိုရ) *
English Title ဇာတ်ကား၏ အင်္ဂလိပ် အမည် *